fanohanana - Changzhou Hucheng Imp.and Exp. Co, Ltd
Wires an-tariby aluminium
CO2 Gasikara Welding Wire
Tariby tariby Flux-cored
Wires vy vita amin'ny vy
Mba hahatonga ny serivisy ho sarobidy kokoa
Manaova safidy tsara ho an'ny indostrian'ny fangatahana hameno ny zavatra takinao. Ny varotra sy ny teknolojia dia ho faly hanoro hevitra anao amin'ny safidy ny lasantsy welding.
24 ora an-tserasera izahay ary afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka, telefaona, WhatsApp, WeChat, Skype, sns. Raha te hijery horonan-tsarimihetsika iray amin'ny Internet ianao hiresaka momba ny orinasa ary hifampizara antsipirihany, dia mba ampahafantaro am-pitandremana mialoha mba hamelana ny fitafianay hivarotra amim-pitandremana hanome ianao tsara tarehy / tsara fahatsapana.
Omena maimaimpoana nomena
Manantena anao fa afaka mahazo ny vokatrao ianao ary hahita ny kalitaony.
Manana fitaovana fanaovana sary miloko folo izahay amin'ny hafainganam-pandeha 18 metatra isan-tsegondra, fitaovana fanaovana sary tsara 26 amin'ny hafainganam-pandehan'ny 14-16 metatra isan-tsegondra, fitaovana simika 56 amin'ny 8 metatra isan-tsegondra, fitaovana fampitaovana 33, milina fanamboarana telo ary fanadiovana rano. toerana iray. Hiantohana ny fandefasana milamina.
Izahay dia manatanteraka TEST TEMPERATIKA TENY, FAMPISEHOANA NY FAHAFATESANA, TEST FIVORIANA SHORT, TEST ARC STRIKING, DROP TEST, ary manome antoka fa ny vokatra dia mihoatra ny 95%
Ny andiany tsirairay avy amin'ny vokatra avy dia manana isa miangona tsy manam-paharoa iray. Raha toa ka misy olana tsara kalitao, dia afaka mizaka ireo olana mitranga amin'ny fotoana rehetra amin'ny laminasa famokarana avy amin'ireo akora akora izahay.
Matoky ny serivisintsika?
Atombohy amin'ny fiarahabana anio.
Mpiandraikitra ny varotra iraisam-pirenena: Bella Wang
NY HITANAO HO CHENG
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Featured Products - Sitemap - Mobile Site
Flux Cored Feeder Wire , Welding Consumables , Flux Cored Arc Welding Wire ,